मुलुकभर २७ प्रतिशत रोपाइँ, धान उत्पादन बृद्धि हुने अनुमान « Khabar24Nepal
असार १७, काठमाडौं । देशभर २७.१२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार असार १५ सम्ममा देशभर २७.१२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको हो ।
गतवर्ष भन्दा छिटै मनसुन सुरु भएता पनि धान रोपाइँ भने गतवर्षको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले कम भएको छ । गतवर्ष यस अवधिमा ३५.४८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मुलुकभर बर्खे र चैते धान गरी १३ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन्छ । जसमध्ये १ लाख २३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान रोपाइँ हुन्छ । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थ बिज्ञ डा. महादेश प्रसाद पौडेलले गतवर्षको तुलनामा धान रोपाइँमा अहिलेको अवधिमा केही प्रतिशत कम भएको देखि पनि केही दिनमै रोपाइँ बढ्ने बताए । रोपाइँ गतवर्षकै हाराहरीमा हुने उनको भनाई छ । गतवर्ष धान बालीमा रासायनिक मलको समस्या देखिएको थियो यसपटक त्यस्तो समस्या नहुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल देशभरी नै रासायनिक मलको समस्या छैन । मनसुन र रासायनिक मल वितरणमा समस्या नहुँदा धान उत्पादन विगतको भन्दा बृद्धि हुनु अनुमान रहेको डा. पौडेललेको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गतवर्ष १४ लाख ७३ हजार क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो भने ५५ खाल ५० हजार आठ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको थियो । विभागको तथ्यांक अनुसार उच्च पहाडमा ४८ हजार १ सय ९३ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । जसमध्ये १६ हजार १ सय ३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । मध्य पहाडमा ३ लाख ४६ हजार ९९ हेक्टरमध्ये १ लाख ७ हजार १ सय १५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । तराईमा ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमध्ये २ लाख ४८ हजार ७ सय ८ हेक्टरमा धान रोपिसकिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश १ मा २ लाख ७५ हजार ९ सय १ हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेकोमा अहिलेसम्म १८ प्रतिशत अर्थात् ४९ हजार ६ सय २३ हेक्टरमा धान भएको छ । गतवर्षको असार १५ सम्ममा २१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
प्रदेश २ मा ३ लाख ६५ हजार ६ सय १५ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । जसमध्ये १०.५५ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार ५ सय ८५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा २९ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा १५ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ । १ लाख १५ हजार २ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रमध्ये २४ हजार २ सय ८८ हेक्टर धान रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष असार १५ सम्म यो तथ्यांक ३६.२२ प्रतिशत थियो ।
गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा गतवर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले धान रोपाइँ कम भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ८ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ  जसमध्ये १५.३४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा ३५.६६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने गत वर्षकै हाराहारीमा ४६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । ३ लाख ३ हजार ५ सय ९३ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । कर्णालीमा गतवर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढी रोपाइँ भएको छ । कर्णालीमा ३८ हजार ३ सय ८५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । जसमध्ये २३ हजार ८ सय ५० हेक्टरमा रोपाइँ भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ६४ हजार ६ सय ३९ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । जसमध्ये ४८.३१ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गतवर्षको असार १५ सम्म ४९.५४ प्रतिशत भएको थियो ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।
बेरोजगारहरुको सूचीमा ७ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको नाम दर्ता
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापादवा्रा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनतर्फ उन्मुख
६५ औं प्रहरी दिवसका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम